Lacag intee leeg ayaa Jabuuti ka soo gasha qaadka: barnaamij laga diyaariyay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Lacag intee leeg ayaa Jabuuti ka soo gasha qaadka: barnaamij laga diyaariyay
Lacag intee leeg ayaa Jabuuti ka soo gasha qaadka waa barnaajim telefishan Faransiisa ka diyaariyay qaadka ayagoo oo dhinaca kale eegaya faaiidada iyo khasaaraha. Wasiirka arimaha dibedda Jabuuti ayaa isaguna si caqli ku jiro uga hadle qaadka oo ay ku noolyihiin bulsho aad u badan.
Qaadka oo ah dhaqaalaha dadban ayaa Jabuuti uga yimaada dhinaca Itoobiya, waxayna dawladu ka qaadataa lacag gaaraysa 15 milyan oo doolar sanadkii.
Waxa kale oo laga hadley qasaaraha uu leeyahay ayagoo waraystey hooyo lix caruura leh oo hawl adag ku jirta ninkeeduna shaqeeyo laakiin uu yahay qaad cun. Hooyadan ayaa leh hadduu qaadka joojiyo waxaan dhisan karnaa guri tayo leh.
Hooyadan iyo ninkeeda iyo caruurteeda ayaa ku jira guri aad ugu yar. Ninkeeda ayaa isaguna leh markaan qaadka cunayo waxaan ilaawaa mashaakliaadka nolosha iga haysta sida gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, wuxuuna ii yahay mid aan asxaabta kula sheekaysto.
Mucaaradka Jabuuti ayaa iyaguna leh waxa qaadka ku nool xukuumada Jabuuti si ay u iibsadaan codka dadka Jabuuti, waxayna soo bandhigeen muuqaalo qarsoon oo taageereyaasha Ismaaciil Cumar Geelle siinayaan dadka si ay ugu codeeyaan.